Blọọgụ - Peeji nke mbụ
Anyị abanyelarị n'ọnwa nke anọ nke afọ, Eprel nọkwasịrị anyị. A maara na ọnwa a bụ ọnwa mmiri n'ebe ugwu na ọnwa ọdịda na ọkara ndịda nke ọzọ. Ọ na-abụbu ọnwa nke abụọ na kalenda ndị Rom oge mbụ, ma ọ ghọrọ ọnwa nke anọ ka e mesịrị […]
Maachị, nke a kpọrọ aha chi agha ndị Rom nke Mars, bụ ọnwa nke atọ nke afọ. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka ọ dị otú ahụ. Na kalenda ndị Rom oge mbụ, Maachị bụ ọnwa mbụ nke afọ ka ọ na-anọchi anya mmalite ọhụrụ n'ihi na ọ na-eji vernal equinox weta mmiri. Maachị bụkwa oge nke afọ […]
February nwere ike ịbụ ọnwa kacha nso n'afọ; Otú ọ dị, ọ dịghị ihe dị mkpa karịa ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na Jenụwarị na-egosi ntụgharị nke ibe ahụ, Febụwarị na-anọchite anya nkasi obi na ịmara afọ ọhụrụ na onyinye ya. Ememe ndị a ma ama dị ka Groundhog Day na Ụbọchị Valentine bụ naanị abụọ n'ime ihe omume nke […]
Jenụwarị bụ mmalite nke afọ ọhụrụ. Ezi afọ ọhụrụ Onye ọ bụla! Afọ Ọhụrụ na-anọchi anya ibe oghere ọzọ, ohere ọzọ ịmalite ọzọ. Dị ka aha ya si dị (nke sitere na Janus - Chineke nke mmalite niile), Jenụwarị bụ ọnwa ebe ohere na ohere ọhụrụ na-echere anyị. Malite n’ụbọchị mbụ nke ọhụrụ […]
Afọ ọzọ gafere N'ezie, Disemba bụ mgbe ọnwa ikpeazụ ga-emechi afọ, agbanyeghị afọ abụọ gara aga ejiriwo ihe dị iche iche na ihe a na-atụghị anya ya na mmechi na-emechi n'ihi ọrịa Corona. Ụdị ọhụrụ a na-akpọ Omnicom abanyela n'ụwa ma onye ọ bụla na-emegharị ọzọ. N'ozuzu, 2021 bụ […]
Ị maara na ọ bụ ezigbo ihe mgbe November ga-abịa. Okpomọkụ na-agbada, Ekele fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a, ezumike na-abịa n'oge na-adịghị anya, na njedebe nke afọ na-arụsi ọrụ ike yiri ka ọ dị nso. Ma ọ dịghị njọ ma ọlị. Ụbọchị Obiọma Ụwa, Ụbọchị Ndị Agha Veterans na, n'ezie ọtụtụ ọkacha mmasị ndị mmadụ, Ekele, bụ ụbọchị [...]
October bụ ọnwa anyị niile na-atụ anya ya. Nke mbụ, ọ pụtara na ọ bụ ọdịda nke eze. Uwe mara mma mgbe ị na-aṅụ iko kọfị na-ekpo ọkụ ma dina n'àkwà na-agụ akwụkwọ yiri ka ọ bụ ihe dị mma n'oge ọdịda. Ihe ọzọ a ga-atụ anya ya bụ ezumike, na ọnụ ọgụgụ ha. […]
Septemba bụ akara njedebe nke oge ọkọchị ma na-anabata mgbanwe n'oge n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ụmụaka na-egwu egwu n'akụkụ oke osimiri, a na-achịkọta ha. Ụlọ akwụkwọ alaghachila ma ụmụaka dị njikere ịga afọ ọhụrụ. Nke a bụ ihe dị anya site na afọ 2 gara aga ọ na-amụ ihe n'ụlọ n'ihi [...]
Enwere ike iji okwu atọ chịkọta Ọgọst: Anyanwụ, oke osimiri na ezumike; mana ọ bụ ụzọ karịa nke a. Ọgọstụ bụ ọnwa kacha dịrị ndụ n'afọ, yana ebe a na -eri anụ, ebe a na -egwu mmiri na nri abalị nke afọ a kpọkọtara ndị mmadụ ọzọ mgbe oria ojoo nke Covid kewapụrụ ha ogologo oge. Daalụ […]
Julaị pụtara na oge ọkọchị abatala nke ọma, ndị mmadụ na -anụ ụtọ anwụ, na -eri nri na mpụga, na -eme barbecues ma na -ahapụ maka ezumike ogologo oge ha. A ka nwere ndị mmadụ na -arụ ọrụ ma na -eche ezumike ha, mana 4 Julaị nke a maara dị ka ụbọchị nnwere onwe bụ ụbọchị zuru oke iji zuru ike ma zuo ike ka ọ na -enye ohere […]
Ihu igwe na -ekpo ọkụ, ụbọchị anwụ na -acha, ọdọ mmiri na oriri osimiri. Ọ bụ oge ọkọchị! Na Woo Hoo, ihe na -alaghachị ugbu a. June na -anọchite anya mmalite nke oge ọkọchị ukara mgbe usoro ndụ na -agbada nwayọ, ụbọchị na -adị ogologo. N'ezie, ụbọchị kachasị ogologo nke afọ bụ na […]
Mee bụ ọnwa nke na -emepe ọnụ ụzọ maka oge ọkọchị, n'ọnwa a okpomoku na -arị elu ma maka ndị nwere ihu ọma inwe ohere efu, osimiri bụ ebe zuru oke iji zuo ike wee nweta ụzarị dị oke ọnụ ahịa. Mee bụkwa ihe dị mkpa site na echiche teknụzụ na sayensị […]
Page 1 nke 2012345...1020...»Ikpeazụ »